သတ္တု လုပ်ကွက်များ ဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်း စစ်ဆေးမည်
သယံဇာတနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းဟာ ကချင်ပြည်နယ် က ဖားကန့်ကျောက်စိမ်းတွင်းတွေနဲ့ မိုးညှင်းမြို့နယ်ထဲက ရွှေတူးဖော်ရေး လုပ်ကွက်တွေကို သွားရောက် စစ်ဆေး ဖို့ရှိပါတယ်။ ဒီကနေ့ မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာခက်အောင် အပါအဝင် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး မနက်ဖြန် ဖားကန့်ဖက်ကိုသွားမယ်လို့ ကချင်ပြည်နယ် သယံဇာတနဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဦးH လအောင်က ပြောပါတယ်။ "ကချင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့နဲ့တွေ့မယ်၊ ဖားကန့်ဘက်မှာ မနက်ဖြန်မှာ၊ သန်ဘက်ခါ မိုးညှင်း ဘက် ပြန်ဆင်းမယ်၊ မှော်တွေကို ကြည့်ရှု့ပြီးတော့ ပြန်လာမယ် အဲ့ဒါပါပဲ၊ ကချင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေတင်ပြဖို့ ရှိပါတယ်၊ ဖားကန့်ဒေသဘက်တွေကို သွားမှာပေါ့လေ" ဦးအုန်းဝင်းဟာ ဧပြီလ ၂၉ ရက်ကနေ မေလ ၁ ရက် နေ့အထိ...
သစ်တောသယံဇာတများ ရေရည်တည်တံအသုံးချ နှိင်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပါဝင်သင့် ပါဝင်ထိုက်သည့်အချက်အလက်များပေးပို့ပါရန်
သယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှ MFPMF သို့ ယနေ့ အောက်ဖော်ပြပါ ကိစ္စရပ်အတွက်ဆက်သွယ်လာပါသည် မေလ ၁၂ နှင့် ၁၃ ရက်နေ့များတွင်ဝန်ကြီးဌာနမှ "သစ်တောသယံဇာတ များ ရေရည်တည်တံအသုံးချနိုင်ရေး" လျာထားခေါင်းစဉ်ဖြင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား (၂)ရက်တာ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၌ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍအနေဖြင့် "သစ်အခြေခံစက်မူလုပ်ငန်း နှင့်တန်ဖိုးမြှင့်ပစ္စည်းများ ထုပ်လုပ်တင်ပို့မူဆိုင်ရာ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေး " ခေါင်းစဉ်ဖြင့်စာတမ်း(၁)စောင်တင်ပြဖတ်ကြားပေးရန်MFPMF သို့တာဝန်ပေးအပ်လာပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍အဆိုပါစာတမ်းတွင်အသင်းဝင်အသင်းသားများ၏ အကျိုးစီးပွား အတွက်ပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်သည်အချက်အလက်များပါဝင်နှိင်စေရန် အသင်းဝင်များအနေဖြင့်မိမိတို့အဆိုပြုတင်ပြလိုသည့်အချက်များကို(၇/၅/၂၀၁၆) ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား၍ပေးပို့သွားပါရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။...
မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်၏အသင်းဝင်လုပ်ငန်းများသည် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် မကြာမီကာလအတွင်းတွေ့ဆုံ၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများ တင်ပြမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အသင်းဝင်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် မိမိတို့တင်ပြမည့် တင်ပြချက်များ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရှိနိုင်ပါရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။
MFPMF’s Extra-ordinary General Meeting
မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်၏ အသင်းသားစုံညီအထူးအစည်းအဝေး (Extra-ordinary General Meeting) အား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မေလ (၂၉)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ် သွားမည်ဖြစ်ပါ၍ု အသင်းဝင်များအနေဖြင့် အသင်းဝင်ကဒ်များ သက်တမ်း တိုးခြင်း၊ နှစ်စဉ်ကြေးများပေးသွင်းခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ပေးကြပါ ရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။...
to improve the production of rattan and bamboo handicrafts in the province...
MFPMF is one of the constituent members of ASEAN Furniture Industries Council (AFIC) which was established in 1978 asaregional trade organisation to coordinate plans and projects that will accelerate and harmonise the growth and progress of the ASEAN furniture industry. The other member countries of...
Myanmar Delegates Leave for IWPA’s 60th Convention
International Wood Products Association’s 60th Convention will be held in Austin, the capital of the US state of Texas, from April5to 8, 2016.
MFPMF members were invited by IWPA to attend the convention. Dr Sein Win, President of MFPMF, led the delegation of four representatives, Dr Sein Lwin, U Thein...